GADISA DEREJE gadodare4533@gmail.com – gadodare4533@gmail.com
BARUMSA SANBATAA 9ffaa — February 27, 2020
BARUMSA SANBATAA 9ffaa
February 27, 2020 February 27, 2020 /gadisaderejemakonnen/Leave a comment
“Xuraa’ummaa Irraa Gara Qullaa’ummaatti “
SANBATA WAAREE BOODA
Qu’annoo Torban kanaaf Dubbisi: Daan. 8; 2:38; Uuma.11:4; Lew.16; Ibr.9:23-28
Heertuu Yaadannoo: Inni duraa deebisee iisa gaaffii gaafate sanaan, “hamma ganamaafi galgala kuma lamaa fi dhibba sadiitti in tura; kana booddee iddoon qulqullaa’aan sun qajeeltotatti in deebifama” jedhe. Daan.8:14
Mul’atni Daani’el 8 keessatti gabaafame bara 548/547 D.K.D raajichaaf kenname, waa’ee firdii isa Daani’el 7 keessaas ifa barbaachisaa kenna.
Daani’el boqonnaan 8 mul’ata Daani’e 2 fi 7 irraa bifa adda ta’een Baabiloniin dhiisee Meedonii fi Faares irraa jalqaba, sababni isaa yeroo sanaa Baabilon kufuutti jirti, mootummaan Faares immoo aangoo addunyaa itti aanee dhufu ta’ee Baabiloniin bakka bu’aa jira. Mulatni Daani’el 8 keessaa isa Daani’el 7 keessa jiruu wajjin wal cina adeema.
Afaannii fi fakkeenyi Daani’el 8 keessaa jijjiirameera, inni xiyyaafannoo isaa guyyaa araarsuu isa waaqa irraa mana qulqullummaa waaqa irraa qulqulleessuu wajjin wal qabsiisee dhi’eessa. Kanaaf Daani’el 8 xiyyafannoo isaa mana qulqullummaa waaqa irraa irra kaa’uudhaan gumaachaa addaa kenna.
Daani’el 7 dhaaddacha sanii fi ilmi namaa mootummaa fudhachuu isaa kan argisiisu yeroo ta’u, Daani’el 8 immoo mana qulqullummaa waaqa irraa qulqulleessuu argisiisa. Akkuma boqonnaan kun lamaan wal cina adeemanii mul’isaniitti mana qulqullummaa waaqa irraa qulqulleessuun inni Daani’el 8 keessaa firdii isa Daani’el 7 keessa jiruu wajjin walfakkaatu.
DILBATA Guraandhala 23 Korbeessa Hoolaa fi Korbeessa Reettii
Daani’el 8 dubbisi.Waa’ee mul’ata kanaa hundumtuu maaliidha, isa nuyi Daani’el 2 fi 7 keessatti ilaallee wajjin attamitti wal fakkaata?
Akkuma isa Daani’el 2 fi 7 keessaa, asittis yoo fakkeenya garagaraatiin ta’e illee waa’eek ka’umsaa fi kufaatii mootummaa addunyaa mul’ata kan biraatu nuuf kenname. Fakkeenyi kun immoo mana qulqullummaa Waaqayyoo wajjin kallattiidhaan wal qabata.
Dhimma kana keessatti fakkeenya korbeessa hoolaa fi korbeessa reettiitti dhimma kan ba’ameef sababa isaan guyyaa araarsuu mana qulqullummaa, isa yeroo firdii Israa’el durii ta’e sirna ayyaanaa wajjin hariiroo qabuufi. Korbeessi hoolaa fi korbeessi Reettii hojii tajaajila mana qulqullummaa keessatti akka kennaa aarsaatti dhi’aatu turan. Garuu guyyaa araarsuu qofaatti wal faana lama ta’anii dhi’aatu. Kanaaf horiin kun lamaan guyyaa araarsuu isa xiyyaafannoo mul’ata kanaa ta’e yaadachiisuudhaaf karoorfamanii fo’aman.
Akka mul’ati kun argisiisutti Daani’el korbeessi hoolaa utuu kallattii sadiitttti ha’uu aerge: gara lixabiiftuutti, gara bitaatti, gara bitaattis (Daan.8:4). Sochiin sadan kun baballachuu aangoo kanaa argisiisa: “Anis korbeesichi gara lixa- biiftuutti, gara mirgaattis ha’uu nan arge; horiin tokko illee isa dura dhaabbachuu hin dandeenye; humni isa jalaa baasuu kan danda’us hin jiru; inni akka isatti tole in hojjeta; ofii isaas baay’ee of guddise.” Daan.8:4.
Akka ergamaan ibsetti korbeessi hoolaa gaanfa lama qabumootummaa Meedonii fi faaresiin bakka bu’a, kallattiin sadan immoo mo’ichaa gaddaa sadan aangoon addunyaa kun argate kan argisiisuudha.
Itti fufee, korbeessi Reettii inni gaanfa guddaa qabu mootummaa Girikii isa ajaja Iskindiri isa guddaa jalatti geggeefamu bakka bu’a (Daan.8:21). Inni korbeessi Reettii inni “miilli isaa lafa hin geenye” (Daan.8:5) ariitiidhaan adeemuu isaa argisiisa. Fakkeenyi kun ariitii mo’icha Iskindiri isa D aani’el 7
keessatti qeerransa baallee qabutti fakkeefame argisiisa.
Garuu akka raajiin kun argisiisutti “yeroo korbeessi reettii garuu gaanfi isaa inni guddichi in cabe” (Daan.8:8), gaanfa arfan hamma daarii waaqaa arfanitti baballataniifis karaan in baname. Kun yeroo Iskindiri waxabajji bara 323 D.K.D waggaa 33 ffaa isaatti Baabilon keessatti du’e raawwatame, mootummaan isaas ancibiraalota isaa arfaniif qoodame.
Daani’el 2:38 fi Daani’el 8:20, 21 gidduutti mul’ata kenname keessatti mootummoota afur keessaa sadiitu mul’ate. Dhugaan dinqisiisaan kun dhugummaa hiikkaa raajii keenyaa jabeessuuf attamitti nu gargaaruu qaba?
((( Gaanfi Xiqqaan Ka’uu isaa ))))
Daani’el 8:8-12 0f eeggannoon dubbisi. Gaanfi xiqqaan kun kallattii kam irra adeema, kana hubachuunis maaliif fayyada?
Heertuun macaafa Qulqulluu gara qilleensa waaqaa arfaniitti baballachuu gaanfota arfanii erga dubbatee booda gaanfi xiqqaan tokko keessaa ka’uu isaa dubbate. Gaaffiin asitti jiru gaanfi/humni kun gaanfota arfan warra ancibiraalota Iskindiritti fakkeefaman keessaa ka’uu isaa yookiin qilleensa waaqaa arfan keessaa ka’uu isaati.
Caasaa seer-luga heertuu kanaa inni afaan jalqabaatiin (original language) ka’ame akka argisiisutti gaanfi kun qileensota waaqaa arfan keessaa ka’uu isaa argisiisa. Humni kun mootummaa Girikii fi dame isa irraa kan caccaban booda kan ka’e erga ta’e gaanfi kun jalqaba Roomaa ishee Waaqayyoon hin waaqesinee fi Roomaa ishee phaaphaasiidhaan geggeefamtuudha. “Gaanfi xiqqaan Roomaa bifa lamaan, ishee waaqa hin beeknee (pagan) fi phaaphaasiidha.
Daani’el Roomaan jalqabatti bifa ishee isa waaqa hin beekneen, bifa mootummaatiin saba Yihudootaa fi kiristiyaanota durii utuu loltuu arge, kana booda bifa phaaphaasummaa isa hamma bara keenyaa fi fuula durattis itti fufuun arge.” The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 841.
Akka heertuu Macafa Qulqulluutti gaanfi xiqqaan sochii isaa dalga (horizontal movement) godhatee “dameen isaas. “Warra arfan kana keessa isa tokko irratti immoo gaanfi xinnaan tokko in biqile ; dameen isaas gara mirgaatti, gara ba’a-biiftuutti, gara biyya isa Waaqayyo ulfinaan guuteetti hammana kan hin jedhamne in guddate.” Daan.8:9. Kallattiin kun sadan bakka aangoo Roomaa ishee Waaqayyoon hin beekne jalatti kufanii wajjin wal fakkaata.
Mul’ata kana keessaatti gaanfi xiqqaan shoora olaanaa lan taphate yeroo ta’u gara oliitti guddachuun isaa (vertical expansion) xiyyaafannoo gadi fagoo gaafata.
Akka armaan gaditti wal bira qabne ilaalutti gaanfi kun gaanfa Daani’el 7 keessaa wajjin baay’ee wal fakkaatu:
(1) Lamaan isaanii jalqabatti xiqqoo turan (Daan. 7:8; 8:9).
(2) Lamaan isaanii booda in guddatan (Daan. 7:20; 8:9.).
(3) Lamaan isaanii humna ari’ataniidha(Daan.7:21, 25; 8:10, 24).
(4) Lamaan isaanii kan arrabsanii fi kan ol of qabaniidha (Daan. 7:8, 20, 25; 8:10, 11, 25).
(5) Lamaan isaanii saba Waaqayyoo irratti xiyyaafatu (Daan. 7:25; 8:24).
(6) Lamaan isaanii yeroo raajiin argisiise keessatti gochaa isaanii raawwatan (Daan. 7:25; 8:13, 14).
(7) Lamaan isaanii hamma xumura baraatti turu (Daan. 7:25, 26; 8:17, 19).
(8) Lamaan isaanii badiisa humna uumamaan oliitu itti dhufa (Dan. 7:11, 26; 8:25). Xumuratti sababa gaanfi xiqqaan Daan.7 keessaa phaaphaasii bakka bu’uuf gara oliitti guddachuun (vertical expansion) gaanfa xiqqaa inni Daan.8 keessaa humnuma kana bakka bu’uu qaba.
Kanaaf akkuma Daan.2 fi 7 keessaa humni xumuraa Roomaa ishee waaqa hin beeknee fi ishee phaaphaasiidhaan geggeefamtudha.
(((( Haleellaa mana Qulqullummaa irratti Ta’e ))))
Daani’el 8:10-12 dubbisi. Hojiin gaanfi xiqqaan in godhamee as keessatti dubbatame maaliidha? Daani’l 8:10 irratti gaanfi xiqqaan jireenya hafuuraa irratti yaalii ijaartota Baabel (Uuma.11:4) irra deebi’ee akka godhutu dubbatame.Jechi “macca” fi :urjoota” jedhu saba Waaqayyoo kan ilaallatuudha. Israa’el macca /loltuu/ gooftaatti fakkeefamu (S/Ba’uu 12:41). Daani’elis saba Waaqayyoo warra amanamoo urjoota ifanitti fakkeessa (Daan.12:3).
Haa ta’u malee kun haleellaa qaama samii irratti qaamaan geggeefame utuu hin taane ari’annaa saba Waaqayyoo warra lammii sanii ta’an (Filip.3:20) irratti geggeefame ta’uun isaa beekamaadha. Kiristiyaanonni kumaatamatti lakkaa’aman mootota Waaqayyoon hin beekneen yoo ajjeefaman illee amma xiyyaafannoon gochaa gaanfa xiqqaa isa inni gara oliitti sochii (vertical activity) godhe irra jira. Kanaaf raawwatamni raajii kanaa phaaphaasii Roomaa isa baroota keessatti ari’ataa turee wajjin wal qabata.
Daan. 8:11 waa’ee isa abboomuu isa irratti (Daani’el 9:25) isa dibame jedhu (Daani’el 10: 21) irratti immoo Mikaa’el sooresicha isa jedhuu fi (Daani .12:1 )irratti immoo Mikaa’el guddicha jedhu dubbata Ibsi kun nama kan biraa utuu hin taane Yesus Kiristosiin ilaallata. Yesus Kiristos angafa macca warra duraan caqafamanii yookiin angafa lubaa samiiti. Kanaaf phaaphaasii fi sirni amantii inni bakka bu’u hojii angafa lubummaa Yesusiin akka hin mul’anne godhan yookiin ofii isaaniiti fudhachuuf yaalan.
Daani’el 8:11 irratti “aarsaan guyyaa guyyaan dhi’aatu” sirna tajaajila aarsaa garagaraa fi araarsuu walitti fufiinsaan ta’u argisiisuudhaaf mana qulqullummaa isa lafa irraa keessatti kan dhi’aatu ture. Cubbamoonni karaa tajaajila kanaadha cubbamoonni dhiifama kan isaan argatanii fi cubbuun kan inni mana qulqullummaa keessatti hafu. Sirni lafa irraa kun tajaajila araarsuu Kiristos isa mana qulqullummaa samii keessaa bakka bu’a.
Kanaaf akkuma raajiin dubbatu phaaphaasiin araarsuu Kiristosiin araarsuu lubootaatiin jijjiire. Gaanfi xiqqaan waaqefannaa fakkeessaa akkasiitiin tajaajila araarsuu Kiristosiin hambise kunis mana qulqullummaa Kiristosiin lafatti gate jedhamee fakkeenyaan ibsame.
“Yommus macci sun itti in kenname, inni immoo irra dadarbuudhaan aarsaa walitti fufee aarfamu irratti dalga hojjete; dhugaas lafatti gadi in darbate; wanti inni hojjete immoo wal in qixxaateef.” Daan.8:12. Kiristos ofii isaatii dhugaa akka ta’etti dubbate (Yoh.14:6), sagaleen Waaqayyos dhugaa akka ta’etti
namootatti argisiise (Yoh.17:17).
Faallaa isa kanaa phaaphaasiin akka Macaafni Qulqulluun qooqa /afaan/ sabaatti hin hiikamneef daangesse, hiikkaa Macaafa Qulqulluus aangoo waldaa jala galche, aadaan immoo akka geggeessaa amantiitti Macaafa Qulqulluu cina akka adeemu taasifame.
Faallaa aadaa namootaa dhugaa Macaafa Qulqulluu beekuun gati qabeessaa fi barbaachisaa ta’uu isaa qorannaan kun maal nutti hima?
(((( Mana Qulqullummaa Qulqulleessuu ))))
Daani’el 8:14 dubbisi. Asitti maaltu ta’e? Gaanfi xiqqaan haleellaa isaa erga geggeessee booda manni qulqullummaan akka qulqulleefamuuf labsame. Ergaa kana hubachuuf mana qulqullummaa qulqulleessuu isa Daan.8:14 keessatti caqafame firdii isa Daan.7:9-14 keessatti caqafamee wajjin wal bira qabnee ilaaluu qabna. Murtiin kun samii keessatti ta’e erga ta’ee manni qulqullummaanis samii keessa jira jechuudha.
Kanaaf, Daan.7 gidu seentummaa Waaqayyoo fi hariiroo dhimma namaa firdii wajjin wal qabsiisee kan argisiisu yeroo ta’u, Daan.8 immoo taateedhuma tokkicha mana qulqullummaa wajjin wal qabsiisee ibsa. Manni qulqullummaa inni lafa irraa karoora fayyinaa isa bal’aa ibsuuf fakkeenya mana qulqullummaa isa waaqa irraatiin hojjetame.
Cubbamoonni guyyaa hundumaa aarsaa isaanii gara mana qulqullummaa iddoo itti sabni cubbuu isaanii himatanii fi dhiifama argatanitti fidu turan. Kana irraa kan ka’e manni qulqullummaa in xuraa’aa ture.Kanaaf cubbuu achi keessatti galmaa’e irraa mana qulqullummaa qulqulleessuuf yeroo fi adeemsi in barbaachisa ture. Innis guyyaa araarsuu jedhamee beekama, waggaattis si’a tokko raawwatama (Leww.16).
Mana qulqullummaa isa waaqa irraa qulqulleessuun maaliif barbaachise? Akkuma Israa’eloonni cubbuu isaanii himatan cubbuun isaanii gara mana qulqullummaa isa lafa irraatti darbaa ture, warri Kiristosiin fudhatanii cubbuu isaanii himatanis cubbuun isaanii gara mana qulqullummaa samiitti darba jennee fakkeenyaan dubbachuun in danda’ama. Guyyaa araarsuu isa lafa irraatti horiin du’a Yesusiin isa fuula duraa isa cubbamoonni guyyaa araarsuutti ittiin dhaabbatan argisiisan in qalamu turan.
Akkuma guyyaa araarsuu isa lafa irraatti manni qulqullummaan qulqulleefamaa ture, dhiigni Kiristos inni firdii keessatti nuuf dhaabbatu samii keessatti hammam isa irra caala? Mana qulqullummaa qulqulleessuun inni Daan.8:14 irratti caqafame fakkeenya tajaajila lafa irraa isa ergaan isaa nuyi akka cubbamootaatti dhiiga masihii isa cubbuu nuuf dhiisuu danda’u fi firdii dura nu dhaabbachiisuu danda’u nu barbaachisuu isaa argisiisa. Ibroota 9:23-28 dubbisi. Heertuun kun fayyina karaa aarsaa Kiristosiin nuuf ta’e attamitti mul’isa?
(((( Gabatee Yeroo Raajiidhaan Kenname ))))
Daan.8:13 dubbisi. Gaaffiin as keessatti gaafatame maali, deebii heertuu itti aanu keessatti kenname hubachuuf attamitti nu gargaara?
Waa’een galgalaa fi ganamaa guyyaa 2300 maaliidha? Tokkoffaa, korbeessi hoolaa fi korbeessi Reettii, hojii isaanii fi badiisi gaanfa xiqqaatiin ta’e Daani’elitti erga mul’atee booda, mul’atni kun gara gaaffii Daan.8:13 irra jirutti akka deebi’e yaadachuu qabna. Gaaffiin kun addumaan waan xumura yeroo raajii irratti ta’u xiyyaafata malee dheerina isaa irratti miti. Itti dabalee yeroon akkasii turtii gochaa gaanfa xiqqaatiin hin daangefamu, sababni isaa jechi mul’ata jedhu gochaa korbeessa hoolaa irraa jalqabee hanga gochaa gaanfa xiqqaatti hammata.
Kanaaf kun yeroo seena qabeessa dheeraa ta’uu qaba. Gaaffii “barri mul’ata kanaa hammam tura?” jedhuuf (korbeessa hoolaa [ Meedoo Faares], korbeessa Reettii [Giriki], gaanfa xiqqaa fi hojii isaa [Roomaa, ishee Waaqayyoon hin waaqesinee fi ishee phaaphaasiidhaan bultu]), qulqulluun inni kan biraan “hamma ganamaa fi galgala 2300 tti ina booddee iddoon qulqulluun sun qajeeltootti in deebifama” jedhee deebiseef. Daan.8:14.
Akkuma hubatamuu danda’u, yeroon kun dheeraadha, sababni isaa yeroo mootummaa Meedonii fi Faares jalqabee hamma mootummaa Girikii fi Roomaa ishee Waaqayyoon hin waaqesinee fi Roomaa phaaphaasiidhaan bultuutti adeema waan ta’ef.
Akka hiikkaa warra seenaa irratti hunda’anii hiikaniitti yeroon raajii kun qajeelfama isa guyyaan tokko- waggaa tokko jedhuu irratti hundaa’un shallagamuu qaba, akkas jechuun ganamii fi galgalli 2300 waggaa 2300 wajjin wal-qixxeedha jechuudha. Yoo akkasi ta’uudhaa baate garuu guyyaan 2300 waggaa ja’a xiqqoo caala, yeroo gabaabduu kun immoo taatee mul’ata kana keessatti dubbatame guutummaa hammachuu hin danda’u. Kanaaf qajeelfamni guyyaan tokko waggaa tokko jedhu bu’a qabeessa ta’a.
Daan.8 yeroo kun itti jalqabe shallaguuf odeefannoo ga’aa nuuf hin kennu, garuu xumura isaa nuuf kennuu in danda’a. Garuu Daani’el 9 odeefannoo barbaachisaa muraasa nuuf kenna. Raajiin waggaa 2300 raajii yeroo dheeraa Macaafa Qulqulluu keessa jiruudha.Waggaa 2300 yaadi! Yeroo amma nuyi jiraannuu wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle waggaan kun dheeraadha. Kana wal bira qabuun taatee yeroo xumuraa keessatti Waaqayyoon eeggachuu ilaalchisee obsuu baruuf kun attamitti nu gargaara?
Yaada Dabalataa:- Gabateen armaan gadii wanta nuyi Daani’el 2,7, fi 8 keessatti ilaallee darbine tartiiba mootumootaa goolabee nuuf dhi’eessa. Kun waa’ee mana qulqullummaa qulqulleessuu maal nutti hima?
Daani’el 2 Daani’el 7 Daani’el 8 Baabilon Baabilon —–
Medoon fi Faares Medoon fi Faares Medoon fi Faares Griikii Griikii Griikii
Roomaa (Pagan) Roomaa (Pagan) Roomaa (Pagan)
Roomaa (phaaphaasi) Roomaa (pha) Roomaa(phaaphaasi) —– Murtii Samii keessaa Mana qulqullummaa/Q Dhufaatii 2ffaa Dhufaatii 2ffaa Dhufaatii Lammaffaa [Dhagaa utuu [Qulqulloonni mootummaa [Utuu harki hin tuqin
harki hin tuqin bade] fottoqe] dhaalu]
Akkuma asitti ilaallu boqonnaa kanneen gidduu wal fakkiitu jira. Mootumoota wal fakkii kan keessatti mul’atan qofa utuu hin taane firdiin Daani’el 7 inni waggaa 1260 (538-1798 D.K.B) yeroo aangoon Phaaphaasii Roomaa mo’ee ture booda jalqabe mana qulqullummaa qulqulleessuu isa Daani’el 8 inni Roomaa booda jalqabame wal fakkaata.
Gabaabaadhumatti, murtiin samii Daani’el 7 inni gara xumura addunyaatti geessu mana qulqulummaa qulqulleessuu isa daani’el 8 wajjin tokkuma.
As keessatti wauma tokkotu bifa garagaraa lamaan dhi’aate, lamaan isaanii iyyuu ari’annaa waggoota 1260 phaaphaasiidhaan ta’e booda raawwataman.
1.Gabateen armaan olii mana qulqullummaa qulqulleessuun inni murtii Daani’el 7 wajjin tokko ta’e yeroo raajii gaanfa xiqqaa 1260 isa utuu mootummaan Waaqayyoo hin bu’urefamin ta’u dura akka raawwatamu attamitti nu argisiisa?
2. Raajiin Daani’el 8 seenaan hamminaa fi jal’inaan akka guutametti dhi’eessa. Horiin achi keessatti argaman lamaan mootumoota addunyaa wal lolan lama argisiisa (Daan.8:8-12). Gaanfi xiqqaan isaan booda ka’es hamaa fi ari’ataa dha (Daan.8:23-25). Kanaaf, Macaafni Qulqulluun addunyaa irra dhiphinni jiraachuu isaa haqa isaa dhoksuuf hin yaalu Hamminni naannoo keenyatti qabatamaa ta’ee utuu jiruu kun attamitti Waaqayyoo fi gaarummaa isaa abdachuuf nu gargaara?
GADISA DEREJE MAKONNEN
Dhaabbata Waldaa — February 21, 2020
February 21, 2020 February 21, 2020 /gadisaderejemakonnen/Leave a comment
Namni tokko ergaa Kirsitoos fiixaan baasu qaba. Namni tokko hojii isa inni biyya lafaa irratti hojjechuu jalqabe itti fufuu qaba. Waldatii dhaafis carraan kun kennameera. Kan isheen ijaaramteefis yaada kanaafi.
Lallaboonni seera hojiin itti geggeefamu jaallachuu qabu. Mataa isaanii adabaan of geggeessutu isaan irra jira. Yeroo sana qofaa waldaa mana Waaqayyoo sirri itti adabuun walii galtee tokkumaan akka hojjetan akka warra loltuu walii wajjin boolla bishaanii tokko ta’ani qotanii barsiisuu fi adabuu danda’u. Yoo adabii fi tasgabbii hojii fiixaan baasuuf iddoo lolaatti nu barbaachisa ta’e, akkasuma caalchisee barbaachisaa dha lola nui itti bobbaane jirruuf akka mo’umsa argachuun gati caalaa qabu, amalaanis caalaatti kan ol ka’e, humna warri nuun mormanii irra bakke iddoo lolaatti. Lala nui lolaa jirrutti, fedhiisi barabaraa balaa irra jira.
Ergamoonni walii galteen hojjetu. Sososcho’ina isaanii hundumaan guutuu kan ta’e seera qabu. Walii galtee gurmuu ergamoota fi seera isaanii caalchifne yeroo duukaa buune ilaallu, nuuf jedhani warri bakka bu’oonni waaqaa dhama’inni isaan godhan caalchisee kan fiixaan ba’e ta’a. Warri dura teessoon dhama’ina isaanii hundaan seeraa, adabaa fi hojiin walii galani hojjechuutti wal jajjabeessu, kana booda ergamoonni Waaqaa isaanii wajjin walii galteen hojjechuu ni danda’u. Garu ergamoonni Waaqaa sun tasa, tasaa iddoo deggaruu isaanii danaa sirrii hin taane, waliin unkuramaa fi buxunxulaan jiru dham’ina isaani hin ka’an. Hojiin humna hamaan akkasii kun Seexanni humna keenya dadhabsiisuuf, jabina keenya balleessuun fiixaan ba’ina hojii ittisuuf kan inni dhama’u bu’aa isaati.
Seexanni seeraa fi hojii walii galtee duwwaan hojiin akka fiixaan ba’u danda’u sirriitti beeka. Waan waaqaa wajjin wal qabatee hojjetame hunduu seera mudaa hin qabneen akka adeemu sirriitti beeka, bitamuun isaanii fi adabni sirriitti geggeessuu akka ergamoonni Waaqa geggeessan mul’isa. Hamma isaaf danda’ame hundumaatti Kiristaanota warra afaan duwwaa abboommi waaqaa irraa kan fagaatan isaan taasisee isaan geggeessuuf dham’ina cimaa gudda dhama’a. Kanaaf warra nu Kiristaana ofiin jedhan illee ni wallaalchisa (gowwoomsa), seeraa fi abboommi eeguun hamajaajii hafuuraa akka waan ta’aniitti isaan amansiisa, kanaafis karaa nagaan hundinuu akkuma fedha mataa isaatti jiraachu, warra tokkummaa qaban Kiristaanota irraas gargar of baasuun fayyina isaanii akka ta’e akka amanan isaan taasisa. Seeraan mormuuf dhama’inni ta’an sodaachisaa akka ta’anii fi bilisumma ofii kan dhowwatu ta’u isaa jarreen gowwomfaman kun carra se’anii billisummaa isaaniin mata isaaniin yaaduu fi hojjechuun hojii gaarii itti fakkaatee ittiin boonu. Akkana jedhaa kan ittiin jedhan waan fedhe hin fudhatan. Nama abba fedhe illee hin fudantan. Ofii isaaniitii falasani tarkaanfii mataa isaani filatani obboloota isaani irraa kan citan ta’uun akka namootatti abboommi Waaqaati jedhani itti dhaga’amu geggeessuun hojii Seexanaa addaan ba’e ta’uun isaa natti argame.
Waaqayyo waldaa isaa ishee lafa irra jirtu iddoo ifa walgeetti ishee taasiseera. Karaa isheetiinis yaada isaa fi fedha isaa dubbata. Hojjetoota isaa keessaa tokko cite keessaa ba’uun mataa isaatiin kan bulu akka ta’ee fi waldatii fis dhaabata isheetii fis mormaa kan ittiin ta’u hojiin hin kennamuuf. Yookiinis waldattiin dhaqni Kiristoos dukkana keessa yeroo taate jirtu, nama tokkoof beekuma ofii isaatti guutumma mana waldaatiif jedhee kan kennu miti. Inni kennu isaatiin, hojjetoota isaa waldaa wajjin wal itti fidee kaa’a, akka isaan ofitti amanachuu isaani xinneessani, caalchisanni ammoo warra kaan warra inni hojii isaa akka geggeesan itti amantee caalu akka qabaataniif.
Waldoota Raajotaan Dhaabate.
Yerusalem itti waldaan dhabachuun isaa akka modeli dhaabbata waldaa hundumaa iddoo hundaa jiruu bakka hojjettoonni sagalee isaa barsiisan lubbu gara wangeelaatti deebisan ta’uuf. Isaan warri itti gaafatamummaan dura ta’aa gegessitu guutumma hojii waldaa eegdu ta’uuf itti kenname kan ture qabeenya gooftaa irratti gooftummaa akka qabaataniif hin ture. Garuu ogeessota tiksee ta’anii “Hoolota Waaqa eeguu.. hoolotaafis fakkeenya akka ta’aniif” malee… Daaqunoonnis “Gaarummaan isaanii kan raga ba’ameef ogumni Hafuura Qulqullus kan isaan keessa guute” akka ta’aniif ture. Isaan kun karaa qajeela irra gorani, wali galani, hojii isaani hojjechu fi jabinaa yaada murtoon geggeessuutu isaan irra ture. Akkasitti namoota hundumaa duratti humna tokkumma (jajjabinaa) qabu turan.
Amantoota warra haaraaf guddina hafuuraaf gargaarsa bu’a qabu waan ta’eef hojjetonni akka sagalee wangeelaatti isaan marsuutti kan dammaqan turan. Geggeesitoonni tokko tokko waldaa irratti muudamanii amantootaaf gargaarsa hafuuraa dhimma gaari kan ta’an geggeessa hundaaf kan ta’u seeraan akkaata inni ittiin geggeefamutu dhaabateef.
Kunis yaada tokkumma wangeelaa wajjin amantoonni hundinuu Kiristoos itti dhaqna tokko ta’ani, Phaa’uloosis hojii isaa hundumaatti qalbiin kana duukaa bu’u irratti of eeggata ture. Iddoo fedhetti hojii isatiin Kiristoosiin Fayyisaa isaani godhatani fudhachuuf warri geggeeffaman, yeroo mijaa’etti waldaa mataa isaani dhaabbatan. Amantoonni lakkobsatti muraasa yoo ta’an iyyu kun ni hojjetama ture. Kirsitaanonni “Lamas ta’anii yookiis sadi ta’ani maqaa kootiin lafa wal itti qabaman itti isaan gidduun jira’o,” isa jedhame abdii yaadachaa wali walii isaanii akka wal gargaaru baratan turani.
Waldhabdee Waldaa Keessa Simachu
Yerusaalemitti, Antiyooki ergamani wara dhufan walga’i irratti waldaa garaa garaatii warra dhufanii obbolootaa wajjin wal ga’ani turan. Achittis ormaa keessatti hojiin isaanii akka guddatee baballataa tures isaan itti himan. Isaanis isa booda amantoota warra beekaman warra Fariisotaa fayyisuuf amantoonni oromoota dhaqna qabuu fu seera abboomi Musee eeguun akka isaan irra jiru gara Antiyok dhaqani waan dubbataniif jeequmsi waan ka’u ta’u isaa beeksisani barreeffama jeequmsa sanaa kennan. Gaaffii kana walga’icha irratti ho’isanii irratti wal itti fallman.
Hafuurri Qulqulluun akka amantoota irratti seera Musee isaan irrati hin feene gaari ta’u isaa arge. Yaadni bartoota Yesuusis waayee kanaa irratti akkuma yaada Waaqayyoo ture. Yaa’iqoob geggeessa mana gorsaa sana ta’e utuu geggeessu murtee isaa dhumaa irratti, “Kanaafis ani nan murteessa orma keessaa gara Waaqaatti deebi’anii akka hin dadhabsiifne” kan jedhu ture. Kun wal itti falmuu sana xumuraan ga’e.
Yeroo kanatti Yaa’iqob mana gorsaatti kan murtaaye murtee dubbachuuf kan filame fakkaata. Amantoonni ormaa seera jireenya Kiristaanummaa wajjin amala warra mormani akka dhiisan ture. Bartoota Yesuusi fi jaarsoliin kanaaf waaqa tolfamaaf isa dhi’aate nyaata, ejja, kan hudhamee ajjeefames, dhiigas nyaachuu akka dhiisan warra oromootaatti xalayaan akka beeksisaniif walii galan. Abboomicha akka eeganii fi jireenya qulqullaa’a akka geggeessaniif akka isaan itti himamuuf ture. Dhaqna qabaan akka isaan itti jabaatu namoonni warri dubbatan kana gochuuf bartoota Yesuusi kan isaani ayyamameef akka hin taane dabalanii isaanii ibsani turan.
Dhimma kana kan murteesse manni gorsaa iddoo addaa addaatii warra filamani ergaman dabalatee kan warra Yihuudaa fi kan warra Oromootaa Kiristaa-nummaa mana Kirsitaana warri dhaaban warri gurguddoon bartoota Yesuusi fi barsiisonni keessa turan. Jaarsolii Yerusaalemii, Antiyok kanergaman achi turan. Gudda kan nama dadamaqsan kan ta’anbakka bu’oota waldaa Kiristaana turan. Manni gorsichaa murtee isaaniif ibsame fi ayyama Waaqaan ishee dhaabatte ulfina waldaa Kiristaanaan geggeeffamuun geggeessani dubbicha miijanu isaanii irraan kan ka’e Waaqayyo ofiin isaa sabaaf Hafuura Qulqullu kennuu dhaan gaaficha akka isaaniif deebise hundi isaanis ni argan. Geggeessa hafuura Qulqulluus faana bu’uun dhimma isaanii akka ta’e hubatani.
Kiristaanonni hundinuu gaafficha irratti filanna akka godhataniif hin waamamne ture. Barattoonni Yesusi fi jaarsoliin warra dhageetti qabanii kan ta’anii fi namoonni murtee awaaji isa himamu murteessanii baasan. Waldootii mana sagadaa kanas guutummaatti fudhatan. Garu murtee ta’e irratti kan itti gamadan hunda miti. Warri garee fi mataa ofi itti warra amanan obboloonni kanatti kan itti walii hin galle mufannaa qabu turan. Namoonni kunis geggeessa ofii isaanii tiin hojjechu jalqabani. Yaada haharaawan baasaa, Waaqayyo akka isaan ergaa wangeela barsiisaniif isaan abboome hojii isaanii jigsuuf barbaadaa guungummii baayyee fi dogoggora barbaadu irratti bobba’an. Waldatii ishee jalqabaa irra gufuun isaaniin morman turan. Hamma dhuma yerichaatis isaan adabamaa.
Murteen Mataa Ofii Akka Guddaatti Yaaduun Sodaachisaa Ta’u Isaa.
Murteen mataa isaanii gudda akka ta’eetti yaaduutti warri jallisan akkaataa gudda kan sodaachius irra jiru. Waaqayyo hojii isaa biyya lafaa irratti ijaaruu fi baballisuuf kan hojjete ifaa walliin wal agarsiiftuu warra ta’an warra akkasii garaagara facaasuuf dham’ina Seexanaa keessa isa cimaadha. Karaa dhugaa ballisu irratti kan ta’e halaafummaa geggeessu akka qabataniif Waaqayyo kan isaan shuumetti dugda gatuun yookiis tuffachuun Gooftaan gargaarsaaf jajjabinaa fi jabina sabaaf mala inni abboome dagachu jechuudha. Hojjetaan fedhe illee karaa dhimma Gooftaa isaan kana darbee ifni isaa karaa walgeetti biraan utuu hin ta’in sirriitti Waaqayyo biraa dhufuun kan ta’uudha jedhanii yaadu, diinaan gowwoomfamu fi mo’amuuf akkaataa danda’amu irra mataa isaa kaa’u isaati.
Gootaan oguma isaatiin amantootni hundinuu qabaachuun kan isaaniif ta’u walgeetti wal itti dhi’ootiin Kiristaanni Kiristaanaa wajjin, waldaan Kiristaanaas waldaa Kiristaanaa wajjin akka walii galan sirreesseera. Egaayis mi’a sabaa kan ta’e Waaqaa wajjin walii gallee hojjechu ni danda’a. Hojjeticha bakka bu’aa kan ta’e hundinuu Hafuura Qulqulluuf kan bitame ta’a; amantoonnis hundinuu isa qixaayee fi gaari ta’e kan geggeeffamu dhama’ina waayyee ayyaana Waaqayyoo kan gammachuu misiraachoo akka himaniif walii galu.
Dhaqni namaa billiitiin addaa addaa hundinuu dhaqna guutuu akka ta’aniif akka walii galanii fi hundumaa isa bulchu sammuf abboomamuun tokoo tokkoon isaanii hojii isaanii akka hojjetan; akkasumas kan Kiristoos amantoonni waldaan Kiristaanaa dhaqna guutuu tokko ta’uuf walii galuu fi hundumaaf dhaabachuu sammuu qulqulaa’af bitamuutu isaan irra jira.
Iddo Addaaddaatti Kan Ta’an Bulchoota Waldaa Kiristaanaa Filuu fi Dibuu.
Barsiisaan Phaa’ulos Tytus itti akkana barreessa: “…Waan toora hin qabaatin hafe akka toora qabsiiftu, mandaraa hundumaa keessattis jaarsolii waldaa geggeessan irra akka dhaabduufn akka ani si fo’e: Namni kunis mudaa kan hin qabne, abbaa warraa haadha manaa tokkoo, ijoolleen isaa kan amanaman malee, gadidhiisatti jiraachuu isaaniitiin yookiis abboomamuu diduu isaaniitiin kan hin hadheeffamin haa ta’u.” Ximootewos 1:5-7. “Harka mataa namaa irra kaa’uutti hin ariifatin,: 1 Gara Ximotewos 5:22.
Waldoota keenya baayyee keessatti hojiin sisirreessuu fi hojiin jaarsolii dibuu yeroo isaa malee kan ta’uu ture; seerri kitaaba qulqulluu xiyyeeffannaan kennamuu fii dhabeera, kanafis dhibee gaddisiisaan waldaa irratti dhufeera. Geggeesitoota hojii itti gaafatamumaaf hin taane filuutti ariifannaa hin barbaachisu, namoota warra qalbii jijjiirannaa isaan barbaachisu, danda’oo kan ta’anii fi kan secca’aman utuu hojii Waaqayyoof hin tajaajilin dandeettii fedheen.
Magaalaa fedhe irratti yeroo yaadni buufatu, yaada sana duuka bu’uun ni ta’a. Kadhanna gara laafinaan kan itti ta’u manni kadhanna milikkita ta’e Sanbatni gooftaa seenaa dukkana morali gidduutti ifa ta’e hamma dhaabatutti iddoon isaa guutu kan ta’e hojiin itti hojetamuun kan ta’uudha. Seenoonni kunis dhugaaf raga ba’oota ta’ani iddoo baayyeetti dhaabachuu tu isaan irra jira.
Dhimmi waldaa Kiristaanaa akkaataa carraa hin qabnetti dhiisuun kan ta’u miti. Hojiin isaa tataafachuun isaa gara booddeetti akka hin hafnee fi qabeenyaan kan namoonni hojii Waaqayyoof qulqulleessantti kennuu hawwan harka hamajaajiitti akka hin miliqnetti. Sabni Waaqayyoo beekumaan hojjechuun akka isaan irra jiru fi hojiin waldaa Kirsitaanaa karaa gaarii geggeessuun waan fedhe illee uttu hin hojjetin hafuun akka isaani hin taanen arge. Akkas gochuu warri danda’an hundinuu erga hojjetamee booda Seexanni itti dhiima ba’uuf saba ishee booddee kan Waaqayyoo irratti harka dursaa akka hin arganneef. Isaan kun akka isaani banuuf gooftaatti amanutu isaan irra jira. Hojjechuuf yeroo Seexanaati. Bubbeen gara fuula duraa nu afoo jira. Yaadotaan mormaa nagaan akka dhaabataniif waldattiin tattaafina isheetiin kan damaqxe ta’u qabdi. Waan tokko hojjetamee taa’uuf yeroon isaa amma. Waaqayyo sabni isaa dhimma waldaa Kiristaanaa gadi dhiisii ta’ee badu irratti akka dhiisuu fi amajaajiin hamma isaaf danda’ame akka fedha isaatii guutumma bu’a argatee dhimmoota sana harka ofii jala bulfachuun akka inni godhuuf ayyamaniif itti hin gammadu.
Gara wal ga’i saba Waaqayyoo dhaquuf dhama’ina baayyee dhama’a. Obboloota koo fi obboleetottan koo, ergaa Waaqayyo isiniif qabu carraa yeroo dhaga’u callisuu irra hojii keessan akka gidiraa hin argine gochuu baayyee isinii wayya. Hamma isini danda’ame hundaan bu’a hafuuraa hundumaa argachuuf sababi isin irraa dhowwuuf itti qabata hin kennina. Biliqqee ifaa hundummaa isin barbaachisa. Abdii isin keessa jiruuf sababii isaa garraamummaa fi sodaan akka kennitaniif isa leenjifamtan ta’u isin barbaachisa. Carra akkasis dhabuun isin irra hin jiru.
Lallaboonni yookiis hojjetoonni wangeelaa eebba walga’i kadhanna akka nuu taasisaniif isaan irratti of amanne eenyuun keenya gara safara walga’i waggaa dhaqun nu irra hin jiru. Waaqayyo ulfina isaanii lallabaa irratti fannise (rarraase) saba irra hin barbaadu. Gargaarsa nama fooni irratti amanachuun akka dadhaban isaan hin barbaadu. Akka ijoollee gargaarsa hin qabne gargaarsaaf nama kaan irratti irkachun iaan irra hin jiru. Ayyaani Waaqayyoo soortuu ta’e maatiin waldaa hundinuu mataa isaa keessa jireenyii fii hundeen akka qabaatuuf itti gaafatamumma mataa isaatii kan itti kenname ta’uun isaa itti dhaga’amu qaba. Fiixaan ba’uun wal ga’ichaa Hafuurri Qulqulluun isaa wajjin ta’u isaa tii fi humna isaatti amanamuu isaati. Dhimma dhugaa kan jaallatu kan ta’e hundinuu gadi dhangala’ina Hafuura Qulqulluuf kadhachuu qaba. Humna nuu danda’ame hundaan hojii isaatiif gufu isa ta’e hundumaa ittisu (dhowwutu) nu irra jira. Gargar ba’ina amantoota waldaa fi walii keenya komachuun yero jaallaannu, Hafuurri Qulqulluun tasuma gadi bu’uuf (roobuuf) hin danda’u. Hinaaffaan, hamminni fi yaadni gadheen, haasaa hamaan hunduu Seexana biraati. Isaanis hojii Hafuura Qulqullu irratti guutummaatti karaa kan cufaniidha. Biyya lafaa kana irrati kan akka waldaa Kirsitaana gooftaaf guddaa jaallatamaa kan ta’e kan biraan hin jiru. Eegumsa hinaaffaa akkasiitiin isaan kan eegamu kan biraan homtuu hin jiru. Hojii isaa kan hojjetan gochaa itti dhageettii isaani miidhaa akka gochuu kan gooftaa gaddisiisu hin jiru. Tuffachuu fi abdi kutachiisuun (sodaachisuun) hoji isaatiin Seexana warra gargaaran hundumaa adaba
Barumsa 7ffaa — February 13, 2020
February 13, 2020 /gadisaderejemakonnen/Leave a comment
Guraandhala 8-14 ((Boolla Leencotaa keessaa Gara Iddoo Ergamoonni jiraniitti))
Qu’annoo Torban kanaaf Dubbisi: Daan.6; 1S/Baraa 18:6-9; Maat.6:6; H/Erg. 5:27-32; Maar.6:14-29; Ibr.11:35-38
Heertuu Yaadannoo: “yommus warri mataa ta’an sunii fi warri kutaa mootummaa bulchan, dubbii mootummicha ilaalu keessatti karaa ittiin Daani’el irratti ka’an barbaaddatan; garuu inni amanamaa waan tureef, wanti inni irraa kaate yookiis balleesse tokko illee irratti hin argamne; kanaaf jarri balleessaa ittiin isa irratti ka’an, karaas hin arganne.”
Meedoonii fi Faares Baabilon irratti injifannoo erga gonfatee booda Daariyoos inni kan warra Meedon ogummaa Daani’eliin hubachuudhaan gara afeerraa mootummaa haaraatti waame.
Raajiin dulloomaan hojii isaa hawwaasa keessaatiin kan biraa caalee waan argameef mootichi inni haaraan mootummaa Meedoo nii Faares irratti bulchaa godhee muude.
Haa ta’u malee akkuma baqonnaan kun mul’isu “cubbuu isa jalqabaa” hinaffaa inni jedhamu Daani’eliin mudatee argame. Utuu seenaan kun hin xumuramin Daani’el hojii mootummaa Meedonii fi Faares irratti qofa utuu hin taane Waaqa isaatiifis amanamaa ta’e argame.
Amanamummaan inni Waaqayyoof qabu amanamummaa inni waan biraatiif qabu irratti dhiibbaa gaarii uumsuu isaa mirkaneefachuu dandeenya.
Ari’annaan Daani’el irra ga’e fakkeenya isa yerroo xumuraa saba Waaqayyoo irra ga’uuti. Seenaan kun sabni Waaqayyoo gidiraa fi dhiphina keessaa ooluu isaanii hin dubbatu. Garuu lola hamaa fi gaarii gidduutti ta’u keessatti gaariin akka mo’uu fi Waaqayyo immoo saba isaa akka furu wabii ta’a.
((( Hinaaftota )))
Samii iddoo guutuu keessatti illee Lusifeer Kiristositti hinaafe. “Lusifeer Yesus Kiristositti hinaafe. Yeroo Ergamoonni hundumtuu aangoo isaa isa guddaa fi hogansa isaa isa qajeelaa beeksisuuf isaaf jilbeenfatan isaanii wajjin jilbeenfate; garuu onneen isaa jibbaa fi hinaaffaadhaan kan guutame ture.” Ellen G. White,
The Story of Redemption, p. 14. Miirri hinaaffaa balaa waan ta’eef abboomota kurnan keessatti illee ajjeechaa fi hanna dhorkuutti dabalamee hin hawwin kan jedhu jira (Ba’uu 20:17). Daan.6:1-5 Uuma.37:11 fi 1Sam.18:6-9 wal bira qabii dubbisi. Seenaa kana keessatti hinaaffaan shoora attamii taphate?
Dandeettiin bulchiisaa Daani’el qabu mooticha yoo gammachiise illee hinaaffaa warra inni wajjin hojjetuu kakaase. Kanaaf malaamaltummaadhaan isa himachuuf hammina irratti koratan. Garuu hanqina isa irra yoo barbaadan illee bulchiisa Daani’el keessatti dogoggora hin arganne.
“yommus warri mataa ta’an suniif warri kutaa mootummaa bulchan dubbii mootummichaa ilaaluu keessatti karaa ittiin Daani’eel irratti ka’an barbaaddatan; garuu inni amanamaa waan ta’eef wanti inni irraa kaate tookiis balleesse tokko illee irratti in argamne kanaaf jarri baleessaa ittiin isarratti ka’an karaas hin arganne.” (Daan 6:4) Jechi afaan Arama’ikii “amanamaa” jedhu “amantiin kan irratti gatamu” jechuudha. Daani’el mudaa kan hin qabne waan tureef bulchitoonni sun hammeessuu sobaa isa irratti kaasan hin qaban.
Haa ta’u malee amanamummaa Daani’el waaqa isaatii fi seera Waaqayyoof abboomamuuf qabus beeku turan. Kanaaf, Daani’eliin kiyyoo keessa galchuuf haala ittiin Daani’el Waaqayyoof abboomamuu fi seera mootummaatiif abboomamuu gidduutti bita ittiin galu qopheessan.
Bulchitoonni sun kana irraa akka Daani’el waan sirrii keessatti seera mootummaa dhiisee seera waaqayyoo deggeru in mirkaneefatan.
Amanamummaan Daani’el dhuga ba’umsa attamiiti? Hinaaffaa ati wallaansoo qabdu attamiitu si mudatee, isa keessattis maal goote? Hinaaffaan dogoggora hafuuraa nama ajjeessu fi nama laamshessu maaliif ta’e?
((( Hammina Daani’el irratti Koratame ))))
Daan.6:6-9 dubbisi. Labsii kana duuba yaada maaliitu jira? Kun bilaashummaa mooticha irratti shoora attamii taphata?
Daariyoos seera utuu hin turin jijjiiruu barbaadu akka labsamuuf mirkaneessuun isaa dadhabina isaati. Inni hoggantoonni mootummaa haaraa hunda’ee haxxummaadhaan siyaassa geggeessan kiyyoo isaan ka’an keessatti kufe. Daariyos bulchiisi isaa bu’a qabeessa akka ta’uuf mootummaa isaa godinaalee 120 tti gargar hire. Haa ta’u malee gochaan kun adeemsa keessa rakkoo godhate. Bulchitoonni dhiibbaa uumsuu danda’an salphaatti fincilaa fi gargar ba’umsa mootummaa fidan.
Akkasitti guyyaa sodomaaf mootichaaf amanamummaa argisiisuuf jecha isa malee wanti biraan akka hin kadhatamneef seerri ba’e. Garuu seerri akkasii utuu Daani’el keessatti hin hammatamin warri mata-dureen mootumichaa, warri mataa kutaa hojii irra jiran, warri kutaa biyyaa bulchan, gurgudoonni mana mootumichaa, abboonni biyyaas hundinuu irratti waliif galaniiru jechuun isaanii mooticha gowwomsuu isaaniiti. Itti dabalees akka waaqaatti isa ilaaluun isaanii mootichaaf waan guddaa dha.
Mootonni Meedonii fi Faares waaqummaa qabu kan jedhu ragaan hin jiru. Tarii labsiin kun amma guyyaa sodomaatti mootiin bakka bu’aa waaqota isaanii ta’uu argisiisa ta’a; kadhannaan waaqota isaaniitiif dhi’aachuu qabus karaa isaa ta’a. Carraa gadhee ta’ee yaada kana kan sosochoose maal akka ta’e mootichi hin hubanne.
Akkasitti wanti koratame kun Daani’eeliin kan miidhu ta’uu isaa mootichi hin hubanne.
Labsiin kun xiyyeefannoo bifa lama barbaada. Tokkoffaa, adabni seera kana cabsuu boolla leencotaatti gatamuudha. Adabni akkasii eessa iyyuu hin jiru erga ta’ee yaada diinota Daani’eeliin dhi’aateedha.
Mootonni Baha dhihoo bara durii yeroo tokko tokko gadi dhiisanii ittiin waa adamsuuf jecha leencota shiboo keessatti kunuunsu turan. Kanaaf warra seera mootii cabsuuf ija jabaatan kukutuuf hanqinni leencotaa hin turre. Lammaffaa, labsiin kun jijjiiramuu hin danda’u. Seerri Meedonii fi Faares kan hin jijjiiramne ta’uun isaa macaafa Asteer 1:19 fi 8:8 irratti caqafameera.
Diyoodoras Sikulas kan jedhamuu seenessaa Girikii durii waa’ee yeroo Daariyos 3ffaa n ( Daariyoos isa Daani’el keessatti caqafame miti) sammuu isaa jijjiiree garuu labsii du’aa namoota qulqulloota irratti ba’e jijjiiruu dadhabee akka jiru dubate ture.
((( Kadhannaa Daani’el ))))
“ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol gali balbala cufadhu abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu! Abbaan kee inni dhoksaatti argus gatii kee siif in kenna.”(Maat.6:6) Daani’el 6:10 wajjin wal bira qabii dubbisi. Daani’el maaliif utuu namni tokko hin argin callisee kadhate?
Daani’el hojjetaa mootummaa muuxannoo qabuudha, garuu hundumaa irra caalaa garbicha Waaqayyooti. Miseensa mootumichaa keessaan labsii mootii sanaa duuba Waan jiru hubachuu kan danda’u isa qofaadha. Labsiin kun Daariyosiif tokkummaa mootummaa isaatii waan jabeessu itti fakkaate, warroota hamaa korataniif immoo tooftaa isaan Daani’eliin ittiin argatan ture.
Dhugaadhumatti, sababni dhugaan hammina korachuu kanaa lala hamaa fi gaarii gidduu jiruudha. Yeroo kana (539 Dh.K.D) Daani’el mul’ata isa Daani’el 7 keessatti barreefame (553 Dh.K.D) fi Daani’el 8 keessatti barreefame (551 Dh.K.D )fudhateera. Kanaaf labsii mootichaa akka siyyaasa namaatti qofa kan fudhatu utuu hin taane akka qamaa lola isaa guddaatti fudhate. Mul’anni ilma namaa inni mootummaa saba Waaqayyoo abbaatiif kennuu fi inni ergamaa mul’ata kana hiiku gargaaru (Daan.7) utuu rakkinni kun itti hin dhufin jabina isaaf kenneera.
Muuxannoo michoota isaatii warra labsii Nebukadinezaariin morman (Daan.3) callaqisuu danda’era.
Akkasitti amala kadhannaa isaa utuu hin dhiisin gara Yerusaalemitti garagalee akkuma amala isaatii guyyaatti si’a sadii kadhachuu itti fufe. Mootii irraa kan hafe nama yookiin waaqa biraa akka hin kadhaneef labsiin yoo ba’e illee Daani’el guyyoota sodoma rakkisaa ta’an kana keessa jireenya kadhannaa isaatii dhiisuuf utuu ejjenoo hin fudhatin yookiin utuu hin dhiisin kadhate.
Bulchitoota sana keessaa labsii mootii mormuuf inni kophaa isaa waan ta’eef gareen xiqqoon isaadha. Karaa jireenya kadhannaa labsii mootichaa isa hin jijjiiramneef amanamuu irra caalaa Waaqayyoof amanamuu mul’ise. H/Erg.5:27-32 dubbisi.
Seera namaatiin yeroo morminu jaalala Waaqayyoo gochaa akka jirru mirkaneefachuu kan nuyi qabnu maaliif? Mee namoota amantii nuyi dogoggora jennee amannu ganuu irra caalaa du’uu filatan yaadi.
((( Boolla Leencotaa Keessatti )))
Daan.6:11-23 dubbisi.Daani’el Waaqayyoof amanamuu isaa dhugaa kan ba’u mootichi jecha maaliitiin argisiise?
Warri Daani’el irratti hamaa koratan sun utuu Daani’el waan labsiin dhorke godhuu argatan.Himata kana gara mootiitti yeroo fidan akkas “Daani’eel inni warra biyya yihudaatii booji’aman keessaa sun abboommii kee, isa ati milikkita itti Gootes hin ulfeessu yaa mootii! Kadhata isaas guyyaatti I’a sadii in dhiyeeffata”(Daan.6:13) jechuudhaan Daani’eliin salphisanii dhi’eessan.
Angafni bulchitoota sanaa, inni mootiichi jaallatu ija isaanii duratti “booji’amtoota” irra hin caalu. Itti dabalanis “ inni seera ati baafte hin kabaju yaa mootii” jedhanii mootii duratti hammeessan. Mootiin labsii kanatti mallatteessuu isaatiin kiyyoo keessa akka gale amma in hubate. “mootichi kana yommuu dhaga’e baayyee in jibbe yaada isaa Daani’eeliin oolchuu irra kaa’ate, amma biiftuun lixxuttis karaa ittiin isa baasu in dhama’e”(Daan.6:14) jedha.
Garuu adaba labsame keessaa raajicha oolchuuf waan gochuu danda’u hin qabu. Seerri Meedonii fi Faares inni hin jijjiiramne akka barreefametti hojii irra ooluu qaba. Akkasitti mootichii fedha isaa duuba akka Daani’el boolla leencaatti darbatamu godhe.
Garuu Daariyoos kana yeroo godhe “kana irrati mootichi abboomnaan Daani’eeliin fidanii boolla leencotaa keessa in buusan; mootichis Daani’eeliin
‘Waaqayyo kee inni ati ittuma fuftee waaqaessutu sihaa oolchu”(Daan.6:16) jedhee kadhachuudhaan calaqqee abdii mul’ise.
Heertuun Macaafa Qulqulluu waan Daani’el leencota gidduutti godhe nutti hin himu, garuu kadhachaa akka ture namni kam iyyuu tilmaamuu in danda’a. Waaqayyo akka isa eeganiif ergamoota isaa erguudhaan amantii Daani’eliin kabaje.
Ganama isaa Daani’el utuu hin miidhamin bulee hojii mootummaa itti fufuf qophaa’e. Ellen Waayit kana irratti yaada yeroo kennitu, “Waaqayyo diinonni Daani’el boolla leencotaa keessa akka isa hin buufneef hin dhorkine; inni namoonni jalloonnii fi ergamoonni hamoonni kaayyoo isaanii akka raawwataniif isaaniif hayyame; garuu oolfamuun garbicha isaatii akka mirkanaa’uu fi injifatamuun diinota dhugaa fi qajeelummaa akka raawwatamuu taasise” jettee dubbati. Prophets and Kings, pp. 543, 544.
Seenaan kun gammachuudhaan kan xumurame yoo ta’e illee (yoo xiqqate Daani’eliif) waa’een seenaa Macaafa qulqulluu (fakkeenyaaf Maar.6:14-29) inni oolfamuu ijoollee isaatiin hin xumuramnee maaliidhaa? Kana attamitti hubanna?
(((( Ijaa Baasuu ))))
Daan.6:24-28 dubbisi.Mootichi waa’ee Waaqayyoo dhuga ba’umsa attamii kenne?
Kutaa seenaa kana keessaa qabxiin baay’ee barbaachisaan Daariyoos guddummaa Waaqayyoo hubachuu fi jajaachuu isaati. Jajannaan kun boqonnaa kanaan dura Waaqayyoon hubachuudhaan dhi’aate hundumaa keessaa (Daan. 2:20–23; Daan. 3:28, 29; Daan. 4:1–3, 34–37) isa caaluudha.
Daariyoos akkuma Nebukadinezaar baraaramuu Daani’eliif Waaqayyoon galateefate. Garuu isa caalaa hojjete: labsii isaa isa duraa jijjiireenamni hundinuu “Waaqayyo isa kan Daani’el haa sodaatu” (Daan.6:26) jedhee labsii baase.
Eeyyee Daani’el dinqiidhaan oolfame, amanamummaan isaa in badhaafame, hamoonnis adabamanii, ulfinni Waaqayyoo fi aangoon isaa haqatti mul’ate. Garuu asitti kan nuyi ilaallu waan nama hundumaatti dhufuuf jiru, isa sabni Waaqayyoo baraaraman, hamoonni adabamanii fi gooftaanis univarsii duratti kabajamuuf ijaa baafatuuf kun fakkeenya xiqqoodha. Daan.6:24 dubbisi. Waa’een heertuu kanaa wanti nama dhiphisu kan biraan maal, maaliifis?
Haa ta’u malee rakkoon nama jeequ tokko isa haati manoonni fi ijoolleen balleessaa hin qabne akkuma warra yakka hojjetanii dhiphachuu isaaniiti. Qajeelummaan waan bu’aa hin buufne fakkaatee yeroo argamu attamittiin ibsuu dandeenya?
Tokkoffaa, gochaan adabbii maatii balleessaa godhan of keessatti hammatu kun akka seera warra Faaresitti murtaa’e hojii irra ooluu akka qabu yaadachuu qabna. Akka qajeelfama bara duriitti maatiin guutuummaan balleessaa miseensa maatii baachuuf ittigaafatama qaba. Kana jechuun mirga isaati jechuu miti; seenaan kun waa’ee seera Faares isa nuyi beeknuu wajjin walii gala.
Lammaffaa, seenaan Macaafa Qulqulluu taatee kana in gabaasa garuu gochaa mootii kana akka hin deggerre hubachuu qabna. Dhugaadhumatti, ijoolleen cubbuu maatiitiif akka hin ajjeefamne Macaafni Qulqulluun ifaatti dhorka (K/Deeb.24:16).
Haqa-maleessummaa kana fakkaatuu fi kan biraa baay’ee keessatti heertuu kan akka 1Qor.4:5 irraa jajjabina attamii argachuu dandeessa? Xuqaan isaa maaliif barbaachisaa ta’e, maal jedhas?
Yaada Dabalataa:- Boolla leencotaa keessaa oolfamuun Daani’el Ibroota 11 keessatti bareefameera. What can be called “The Hall of Fame of Faith” says that prophets, among other accomplishments, “stopped the mouths of lions” (Heb. 11:33).
Kun dinqisiisaadha, garuu gootoonni amantii warra akka Daani’eliin du’a duraa ba’an qofaa akka hin taane akka Ibroonni 11 kaa’utti warra jagnummaadhaan dhiphatanii fi du’anis akka hammatu yaadachuu qabna. Kanaaf seenaan oolfamuun Daani’el akkuma dhiironnii fi durboonni baay’een sababa Yesusitti amananiif ajjeefamuu isaanii barannee turre oolfamuun akkasii hundumaaf kennamuu kan jedhu hin argisiisu.
Haa ta’u malee diinqiidhaan oolfmuu Daani’el qajeelfama Waaqayyoo argisiisa, akkasumas ijoollee isaa hundumaa humna cubbuu fi du’aattii in oolcha. Kun boqonnaa macaafa Daani’el isa itti aanuu keessatti ifa ta’a.
1. Jiin Paa’ul Sartree kan jedhamu namni Faransaayii yeroo tokko “projektii bu’uura dhugummaa sanyii namaa karaa filatamaan ittiin amansiisan uumamani namaa projektii Waaqayyooti iechuudhaan” jedhee barreesse.” (Jean Paul Sartre, Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology, Washington Square Press, 1956, p. 724). Mootichi kiyyootti maaliif akka kufe hubachuuf kun attamitti nu gargaara. Jireenya keenya keessatti haxxummaa akkasiitti luucca’uun balaa inni qabuutti of eeggachuu kan nuyi qabnuuf maaliif? Karaa nuyi Waaqayyoon fakkaachuu qabnu karaan kan biraan kami?
2. Amanamuummaa nuyi Waaqayyoo fi seera isaatiif qabnu ilaalchisee dhuga ba’umsi nuyi warra kan biroof kennuu qabnu dhuga ba’umsa attamiitti? Hojii kee yookiin jireenya kee aarsaa gochuu yoo si gaafate illee namoonni si beekan amantii keetiif akka ati dhaabbatu beekuu?
3. Daani’eliin nama Waaqayyo kaayyoo isaa fiixaan baasuuf itti fayyadamu ta’uu isaa maal argita? Gargaarsa gooftaatiin attamitti amala kana guddifachuu dandeessa?
4. Daani’el sababa labsii kanaaf haala kadhannaa isaatii jijjiiruuf utuu murteessee karaa kamiin qajeelaa ta’uu danda’a? Yookiin kun dhugaa mareetti fiduu balaa qabaa? Yoo akkas ta’e maaliif?
BARUMSA SANBATAA GA’EESSOTAA — February 7, 2020
BARUMSA SANBATAA GA’EESSOTAA
February 7, 2020 March 28, 2020 /gadisaderejemakonnen/2 Comments
Oftuulummaa irraa Gara Gad-Of deebisuutti
((( Oftuulummaa irraa Gara Gad-Of deebisuutti ))))
SANBATA WAAREE BOODA Barumsa Torban Kanaaf Qayyabadhu: Daan.4:1-33; Fakk.14:31; 2Moot.20:2-5; Yoon. 3:10; Daan.4:34-37; Phili.2:1-11.
Heertuu Yaadannoo: “Daan.4:3- milikkitoonni isaa attam gurguddaadha, dinqiiwwan isaas maal maal aango-qabeeyyiidha! Mootummaan isaas mootummaa bara baraati. Inni dhalootaa hamma dhalootaatti darbee in mo’a!
Oftuulummaan madda caubbuu isa dhugaa jedhamee waamame. Jalqaba Lusfeer irratti mul’ate, dhaaddacha samii keessatti ergamaa ture. Kanaaf Waaqayyo Hisqi’eeliin akkas jedha “sababii miidhagummaa keetiif garaan kee in koore sababii sinboo keetiifis ogummaa kee in balleessite; kanaaf an lafatti gad si darbadhee moototni akka si ilaalan godhe.” (His 28:17).
Lusfeeriin kufaatiitti kan geesse oftuulummaadha, har’as oftuulummaa isaatti fayyadamuudhaan kumaatamatti kan lakkaa’aman daandii badiisaatti qajeelchaa jira. Nuyi hundumti keenya namoota kufnee jiraachuudhaaf Waaqayyo irratti hirkachuu qabnuudha.
Kennaan nuyi qabnu, wanti nuyi kennaa sanaan hojjennu hundumtuu Waaqayyo biraa qofa dhufa. Erga akkas ta’ee wanti nuyi goonu hundumtuu gadi ofdeebisuudhaan ogganamuu (geggeefamuu) utuu qabuu attamitti oftuuluuf, ofjajuufis ija jabbaachuu dandeenya?
Faayidaa gadi ofdeebisuu hubachuuf Nebukadinezaariin yerro dheeraa isa fudhate. Namni inni afuraffaan ibidda boba’u keessatti mul’achuun isaa illee jireenya isaa hin jijjiirre. Mootichi haala isaa isa sirrii kan inni hubate erga Waaqayyo mootummaa isaa irraa fuudhee akka bineensa bosonaatti akka jiraatuuf ergee booda ture.
(((( Kun Baabilon Guddittii Mitii Ree? )))))
Daan.4: 1-33 dubbisi. Mooticha irratti maaltu ta’e, maaliif? Waaqayyo Nebukadnezaariif abjuu lammaffaa kenne. Yeroo kana mootichi abjuu isaa hin irraanfanne.
Garuu sababa ogeessonni Baabilon abjuu isaa hiikuu waan dadhabaniif mootichi akka Daani’el abjuu isaa isaaf hiikuuf carraa kenne. Abjuu kana keessatti mootichi muka dheerinni isaa waaqa bira ga’uu fi ajajaan samii tokko mukichi muramuu isaa ajajuu isaa arge.
Garuu hidda isaa lafatti akka dhiisanii fi fixeensa waaqaatiin akka tortoru himame. Garuu Nebukadinezaariin kan jeeqe kutaa abjichaa isa eegduun samii “sammuunsaa sammuu namaa irraa haa gedderamu sammuun bineensaas isaaf haa kennamu, barri torbas isa irra haa darbu” (Daan.4:16)jedhee dubbatee ture. Daani’el abjuun sun cimaa ta’uu isaa hubachuudhaan abjuun kun diinota isaatiif akka ta’u dubbate.
Haa ta’u malee ergaa karaa abjuu kanaa kennameef amanamuudhaan dhugummaan abjuu kanaa mootichuma mataa isaa akka ilaalatu itti hime.
Mukti yeroo baay’ee fakkeenya moototaa, kan biyyaa fi mootumootaa ta’e dhimma itti ba’amaa tureera (His.47:13;Hos.14;Zekk.11:1,2;Luq.23:31). Kanaaf mukti guddaan mootii oftuulaa bakka bu’a.
Waaqayyo Nebukadineezaariif mootummaa fi aangoo,kenneeraaf; haa ta’u malee garuu wanti inni qabu Waaqayyo biraa dhufuu isaa hin hubanne. Daani’el 4:30 irratti xiyyaafadhu. Wanti mootichi dubbate akkeekachiisa gooftaan isaaf kenne akka inni hin hubatin jiru attamitti argisiisa?
Oftuulummaan waan hundumaaf Waaqayyo irratti hirkachuu irraanfachuutti kan nu geessu waan ta’eef balaa qaba ta’a. Si’a tokko kana irraanfachuun immoo bu’uura jireenya hafuuraatiif balaadha. Jireenya kee keessatti wantoonni ati raawwate maal fa’i? Ofii keetii oftuulaa utuu hin ta’in isa keessatti oftuuluu in dandeessaa? Yoo akkas ta’e attamitti?
(((((( Raajiidhaan Akeekkachiifamuu )))))
Daani’el 4:27 dubbisi. Daani’el wanta dhufuf jiru akeekkachiisuutti dabaluudhaan akka mootiin godhuuf maal itti hime, maaliif?
Daani’el abjuu hiiku qofa utuu hin taane haala Nebukadunezaar keessa jiru keessaa akka inni ba’uuf isatti argisiisee ture. “kanaaf yaa mootii gorsi koo si biratti fudhatamaa haa ta’u wanta qajeelaa hojjechuudhaan cubbuu kee warra gad qabamanitti hoo’a argisiisuudhaan yakka kee ofirraa cabsi! Tarii gabiitti jiraachuun kee siif in dheerata ta’a!” Daan.4:27
Nebukadinezaar Baabilon keessatti ijaarsa guddaa ijaaree ture. Dhaabaan mukeetii, jallisiin achi keessaa fi manni qulqullummaan dhibbatti lakka’aman, akkasumas ijaarsi garagaraa achi keessa jiran akka magaalattiin biyyoota bara durii sana keessaa dinqifatamtu taasise. Garuu miidhaginni kun humna garbootaa gar malee itti fayyadamuu fi hiyyeessota dagachuudhaan kan raawwatamedha.
Ergaan Nebukadineezaariif kenname waan haaraa miti. Raajonni kakuu haaraa hiyyeessota akka isaan hin cinqursineef saba Waaqayyoo akeekkachiisaa turaniiru. Dhugaadhumatti mootota boojuutti akka isaan kennaman gochaa kan ture cubbuun beekamaan hiyyeesota dagachuu ture. Hundumaa irra caalaa hiyyeesotaaf garaa laafuun kiristiyaanummaa isa sirrii argisiisuudha, faallaa isa kanaa hiyyeesota dagachuu fi hacuucuun immoo Waaqayyoon mormuudha.
Hiyyeesotaaf eeggannaa gochuun Waaqayyo waan hundumaa akka qabu hubachuudha, akkas jechuun immoo nuyi abbaa qabeenyaa utuu hin taane soortota qabeenyaa Waaqayyoo ta’uu keenya mul’isa.
Qabeenya keenyaan warra kaan yeroo tajaajillu Waaqayyoon kabajuu fi gooftuummaa isaa hubachuu argisiifna. Bu’aa fi gatiin qabeenya wantootaa kan tilmaamamu abbaan qabeenyaa Waaqayyoon ta’uu isaatiin. Nebukadinezaar hubachuu kan dadhabe isa kana, nus waan goonu irratti Waaqayyo hundumaa kan danda’u ta’uu isaa yoo hubachuu baannee fi hiyyeesota gargaaruudhaan yoo kana mirkaneessuudhaa baanne balaa akkasii keessatti kufuu dandeenya.
(((( Isa hundumaa gararraa jiru ))))
Qalbii jijjiiratee Waaqayyoon dhiifama akka gaafatuuf isa itti himame irra darbee oftuulummaan Nebukadinezaar akka labsiin samii isa irratti ba’u taasise (Daan.4:28-33). Utuu mootichi mana mootummaa isaa irra adeemee waan godheef ofiisaa galateefatuu dhibee sammuu mana mootummaa keessaa isa ari’uun qabame.
Haalli dhibee sammuu isa qabe kun maraatummaa waangoo (yeeyyii) wajjin kan wal fakkaatu ta’uu danda’a. Haalli kun nama dhukkubsate kana akka bineensaa taasisa. Bara si’anaa dhukkubni kun isa qaamni nama tokkoo sirrii akka hin taane itti dhageesisee akka horii ta’uu nama hawwisiisu “species dysphoria” jedhamee waamama.
2Moot.20:2-5; Yoon.3:10; Erm.18:7,8 dubbisi. Mootiin kun adabbii isaa ooluuf carraa inni qabu ilaalchisee heertuun kun maal nutti himu?
Carraa gadhee ta’ee Nebukadinezaar karaa cimaa ta’een barachuu qaba. Aangoon mootummaa yeroo itti kenname Nebukadinezaar Waaqayyoo wajjin hariiroo uumuu hin argisiifne. Akkasitti aangoon mootummaa isa irraa mulqamuudhaan bineensa cakkaa wajjin akka jiraatuuf ari’atamuudhaan isa irratti hirkachuu akka baruuf Waaqayyo carraa kenneef.
Dhugaadhumatti, Waaqayyo isa “bantii waaqaa keessa jiraatu” (Daan.4:26) mootii oftuulaa kana barsiisuu barbaade. Akkuma ajajaa samiitiin himametti murtiin mootiicha irratti ba’e karoora Waaqayyoo keessatti guddaa ture. “dubbii cite kana eegdota warra ergamantu abboome murtoo kanas warra qulqulloota sanatu dubbatekanaan inni hundumaa gararraa jiru mootummaa namootaa irratti akka mo’u; abbaa ofii isaatii jaallateefis akka kennu namoota hundumaa keessaa isa gad deebi’aas isarra akka inni kaa’u warri jiraatan hundinuu haa beekan! Jedhee anatti dubbate Daan.4:17
Karaa biraatiin, adabni Nebukadinezaar hunduma keenyaaf barumsa qaba. Sababni isaa garee “warra jiraataa” keessa hamma taanetti inni “bantii waaqaa keessa jiraatu mootummaa namootaa irratti akka mo’u” baruu qabna.
Inni bantii waaqaa keessa jiraatu mootummaa namootaa irratti akka mo’u baruun maaliif nu gargaara, fakkeenyaaf, warra aangoo isaan irratti qabnu qixa sirriitiin geggeessuuf dhiibbaa attamii qaba?
(((( Gara Waaqaatti ija ol Fudhachuu )))))
Daan.4:34-37 dubbisi.Nebukadinezaaritti haalli attamitti, maalifis jijjiirame?
Nebukadinezaar dhukkuba addaatiin akka rukkutamuuuf Waaqayyo hayyame, garuu inni gara sammuu madaallii qabuutti isa haaresse. Dhuma waggaa torbaa isa raajichaan dubbatametti mootiin rakkoo sammuutiin dhukkubsatee ture sun ija isaa gara waaqaatti ol fudhate. (Daan.4:34).
Nebukadinezaar waggoota torbaaf namoota bittaa isaa jala jiran biratti dinqifatamee ture; waggoota torbaaf addunyaa guutuumaa duratti gadi deebi’e. Kana booda yaadni isaa deebi’eefii adaba isaa keessa harki Waaqayyoo akka jiru hubtee gadi of deebisuudhaan ija isa gara Waaqayyo isa waaqa irratti ol fudhate.
Yeroo fayyummaan isaa iddootti deebi’ee cubbuu isaa beeksisuudhaan araara waaqa guddaa namoota duratti labse.” Ellen G. White, Prophets and Kings, p.520.
Ija keenya gara waaqaatti yeroo ol fudhannu jijjiiramni guddaan ta’uun isaa gaaffii hin qabu. Akkuma hubannaan isaa deebi’een mootichi barumsa kana barachuu isaatiif raga kenne.
Garuu seenaan kun amma waa’ee araara Waaqayyoo irratti xiyyaafatu waa’ee Nebukadineezaar irratti hin xiyyaafatu.Mootichi waaqaIsraa’eliin akka gooftaa jireenya isaatiitti fudhachuuf carraa sadii duraan of dabarse.
Carraan kun yeroo ogummaa dargaggoota Ibrootaa booji’aman afran hubate (Daan.1), yeroo Daani’el abjuu isaa hike (Daan.2), fi Yeroo namoonni Ibrootaa sadan ibidda keessaa oolan (Daan.3) ture. Hundumaa booda immoo, utuu haalli kun gadi isaa hin deebifne ta’ee maaltu ta’a? Waaqayyo gar jabina bulchaa biyyaa kana hundumaa dhiisee carraa afuraffaa kenneef, xumuratti onnee mootichaa mo’achuudhaan waajjira mootummaa isaatti isa deebise (Daan.4).
Akkuma haalli Nebukadinezaar argisiisu Waaqayyo gara isaa wajjin hariiroo sirrii qabaachuutti nu deebisuuf carraa duraa fi duubaan nuuf kenna. Akkuma Phaawulos jaarraa heduun dura barreesse “Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu, dhugaa beekuu biras akka ga’u in fedha”1xim.2:4. Seenaa kana keessatti fakkeenya dhugaa humna qabu kanaa argina.
Karaa attamiitiin Waaqayyoon gadi deebifamte? Muuxannoo kana keessas maal baratte? Barumsa kana irra deebitee akka hin fudhaneef jijjiiramni attamii akka si irratti ta’uu barbaadda?
((((( Kan Gad of Deebisee fi Galata Qabeessa )))))
Mootichi inni qalbii jijjiirate akkas jedhee labse: “warri lafatta jiraatan hundinuu waan tokkotti hin lakkaa’aman; inni macca bantii waaqaa keessatti, warra lafarra jiraatan gidduuttis akkuma jaalala isaatti hin hojjeta harka isaa hojjechuu irraa kan ittisu waan inni hojjetus kan gaafatus tokko illee hin jiru.”Daan.4:35. Qabiyyee kenname kana keessatti xuqaa barbaachisaa maal dubbachaa jira?
Nebukadinezaar waaqa dhugaa dhugummaatti fudhachuu isaa attamitti beekna? Barreessaan Daani’el 4 Nebukadinezaar mataa isaa akka ta’e ragaa ijoo xiqqoo arganna. Dhugaadhumatti, boqonnaa kana keessaa gari caalaan xalayyaa mootichi guutuummaa biyya isaa keessatti raabse fakkaata.
Xalayyaa kana keessatti mootichi waa’ee oftuulummaa fi gowwummaa isaatii dubbachuudhaan jireenya isaa keessatti giddu seentummaa Waaqayyoo gadi of deebisee hubate. Mootonni durii kabaja dhabuu isaanii waan muraasa barreessu. Irra caalaan dokumentii mootumoota durii mootota ulfeessuu isaa beekna.
Dokimentiin akkasii inni mootiin oftuulummaa fi amala bineensummaa isaa keessatti mul’ise jijjiirama dhugaa argisiisa. Itti dabalees mootichi xalayyaa muuxannoo fi gadi of deebisee guddummaa Waaqayyoo barreessuun isaa akka ergamaa wangeelaatti hojjechuu isaati.
Waan shaakalee fi waan Waaqa dhugaa irraa barate of keessa dhoksuu hin dandeenye. Iddoo kanatti kadhannaa fi galatni mootichaa inni (Daan.4:34-47) keessaa shaakala isaa isa dhugaa argisiisa.
BARUMSA SANBATAA GA’EESSOTAA — January 31, 2020
January 31, 2020 March 28, 2020 /gadisaderejemakonnen/Leave a comment
barumsa 4ffaa — January 22, 2020
January 22, 2020 January 29, 2020 /gadisaderejemakonnen/Leave a comment
((( Ibidda Keessaa Gara Mana Mootummaatti ))))
SANBATA WAAREE BOODA: Barumsa Torban Kanaaf Qayyabadhu: Daan.3; Mul.13:11-18; Ba’uu 20:3-6; K/Deeb.6:4; 1Qor.15:12-26
Heertuu Yaadannoo: “Oolchuu yoo ta’e immoo, Waaqayyo keenya inni nuyi waaqessinu ibidda boba’aa keessaa nu oolchuu in danda’a, harka kee keessaas nu in oolcha, yaa mootii.” Daan. 3:17
Dargaggoonni kun Hafuura Qulqulluudhaan guutamanii amantii isaanii, waaqa jiraataa fi dhugaa isa waaqessan guutumaa biyyatti beeksisan. Amantii isaanii mul’isuun kun qajeelfama isaan ittiin jiraatan kan dubbatuudha. Humnaa fi guddummaa waaqa jiraataa warra waaqa tolfamaa waaqessanitti beeksisuuf garboonni isaa ulfina Waaqayyoo mul’isuu qabu.
Kabajaa fi waaqefannaa kan isaan kennuufii qaban isa qofa akka ta’e mul’isuu fi lubbuu isaanii illee oolfachuuf jecha waaqa tolfamaa ulfeessuutti ilaalcha xiqqoo ishee kennuu fi akka dhugaatti fudhachuu akka hin dandeenye mul’isuu qabu. Barumsi kun shaakala yeroo xumuraatti nu mudatuu wajjin kallattiidhaan wal fakkaata.” Ellen G.White, In Heavenly Place, p.149.
Bara saayinsii fi waaqa tolfamaatti sagadduun babal’atee addunyaanis guddatte kana keessa Sababa waaqeffannaaf sodaachisi du’aa yeroo ba’u wanti kana fakkaatu akka ta’u macaafni Qulqulluun ifa godha. Kanaaf seenaa kana qorachuudhaan amanamummaa Waaqayyoo isa Macaafni Qulqulluun dubbatu in hubanna.
(((( Bifa Fakkeenyaa Warqee ))))
Daani’el 3:1-7 dubbisi. Akka mootichii siidaa kana dhaabuuf maaltu isa kakaase?
Bifa fakkeenyaa kana dhaabuu fi abjuu mootii gidduu waggoota digdamatu jira. Ta’us abjuu isaa Baabiloon humna kan biraatiin akka bakka buufamtu dubbatu mootichii waan irraanfate hin fakkaatu. Mataa warqichaa qofa ta’uun waan isa hin quubsineef warra bittaa isaa jala jiran mootummaan isaa kan barabaraa ta’uu hubachiisuuf mootummaa isaa guutuummaa fakkeenya warqeetiin bakka buusuu barbaade.
Ilaalchi oftuulummaa kun ijaartota gamoo Baabel warra warra oftuulummaa isaaniitiin Waaqayyoon mormuuf yaalan nama yaadachiisa. Oftuulummaan Nebukadineezaar isa kan isaaniin gadi miti. Akka geggeessaa Baabiloonitti waan guddaa waan hojjeteef yaad isa mootummaan isaa dabarfamee kan biraaf kennama jedhuutti amanee jiraachuu hin barbaanne. Kanaaf oftuulummaadhaan bifa fakkeenyaa tolchee aangoo isaa tursuu fi amanamummaa namoota isa jala jiranii hubachuu barbaade. Fakkeenyi kun
mooticha yookiin wooqota bakka bu’ee tolfamuun isaa wanti ibsame hin jiru, toorri siyyaasaa fi amantii gargar baasu yoo jiraate illee asitti walitti dabalamuu isaatu mul’ata.
Nebukadineezaar Waaqa dhugaa baruuf carraa lama akka inni qabu yaadachuu qabna. Tokkooffaan, dargaggoota Ibrootaa qoree ogeessota Baabiloon irra caalaa ogeessota ta’uu isaanii argeera.Kana booda ogeessonni kan biroon abjuu isaa isa yaadachiisuu kan dadhaban Daani’el yaada sammuu isaa keessa ture, abjuu fi hiikkaa isaa isaaf ibsee ture.
Xumuratti, waaqni Daani’el guddaa akka ta’e mootichi hubatee ture.Garuu qu’annoon amantii duraa kun Nebukadineezaar gara waaqa tolfamaatti akka hin deebineef isa hin daangesine. Maaliif? Sababa oftuulummaatiif. Ilmaan namootaa cubbuutti kufan wanti dandeettii fi qabeenyi isaanii raawwatu kan akkasumaanii fi kan badu ta’uu isaa hubachuuf in mormu.
Wanti nuyi goonu wantoota barabaraa duratti yeroo ilaalamu hiikkaa kan hin qabne ta’uu isaa dagachuudhaan yeroo tokko tokko “Nebukadineezaar” xiqqoo yeroo taanu jiraachuu danda’a. Karaa hubachuu hin dandeenyeen kiyyoo Nebukadineezaar itti qabame kanatti akka hin kufneef attamitti baruu dandeenya?
((( Gara Waaqefannaatti Waamamuu )))
Daan.3:8-15 fi Mul.13:11-18 dubbisi. Waan bara Daani’el keessa ta’ee fi waan fuula duratti ta’uf jedhu keessatti wal fakkii attamii argina?
Fakkeenyi warqee inni bakkee duuraa keessa dhaabamee maqaan isaa afaan warra Akkadotaastiin “bakka keenyaniin daangefame” jedhamee beekamu bakka keenyaaniin daangefame sana mana qulqullummaa bal’aa taasise. Akka waan iddoon sun hin geenyeetti ibiddi isa cina jiru akka iddoo aarsaa tti fayyaduun isaa in yaadatama.
Meeshaan farfannaa warra Baabiloon akka qaamaa waaqefannaatti ilaalama ture. Meeshaan faarfannaa miidhagina sana guutuu fi bu’a qabeessa akka waan taasisuutti si’a torba caqafame. Har’a, jireenya haaraa, yaada haaraa fudhannee aangoo Waaqayyoo isa sagalee isaa keessatti ibsameef of kennuu akka dhiifnuu fi warraa yeroof mootummaa Baabilooniin dhaalaniif amanamummaa keenya akka kenninuuf kallattii hundumaan waamichi nuuf dhi’aata.
Harkisi biyya lafaa yeroof cimaa fakkaachuu danda’a garuu amanamummaa keenya isa xumuraa Waaqayyo uumaa keenyaaf gochuu akka qabnu mataa keenya amansiisuu qabna. Akka dhahaa yeroo raajiitti seenaa lafaa kan guyyoota xumuraa keessa jirra. Jiraatonni lafaa fakkeenya bineensichaaf sagaduutti akka waamaman Mul’ati 13 nutti hima. Kun immoo “xinnaan, guddaan, sooressi, hiyyeessi, birmaaduun, garbis harka bitaa irratti yookiis adda irratti gubaa akka qabaatu in gochisiisa.” (Mul.13:16).
Namoota garee ja’atu fakkeenya bineensichaaf amanamummaa isaanii kenna jedhamee dubbatame: isaanis “xinnaan, guddaan, sooressi, hiyyeessi, birmaaduun, garba.” Lakkoobsi bineensichaa inii 666 lakkoobsa ja’a irratti xiyyaafata.Kun immoo fakkeenyi Nebukadineezaar dhaabe isaa Baabiloon guyyaa
xumuraa gootuuf fakkeenya (Daan.3:1fakkenyi inni kunis ja’aa fi jaatama waan ta’eef).
Kanaaf, hariiroo cimaa seenaa kana lamaan gidduu jiruu fi attamitti Waaqayyo dhimma addunyaa kanaa akka to’atu irratti yoo xiyyaafanne gaariidha.
Waaqefannaan waan tokko yookiin nama tokko duratti jilbeenfatanii amanamummaa ofii mul’inatti kennuufii miti. Karaan biraan kana irra caalu gooftaa irra caalchifnee sagannuuf maaliidha?
((((( Qormaata Ibiddaa ))))
Waaqefannaan bifa fakkeenyaa inni karaa mootichaa Ibroota sadan irratti dirqisiifame fakkeessaa waaqefannaa mana qulqullummaa isa isaan xinnummaa isaaniitti Yerusaalem keessatti shaakalaniiti. Mana mootummaa keessatti ga’ee hojii kan qabanii fi mootichaaf kan amanaman yoo ta’an illee amanamummaan isaan Waaqayyoof qaban amanamummaa isaan namaaf qabanitti daangaa godha.
Ayyaana sana irratti hirmaachuu kan hin dandeenye yoo ta’an illee akka bulchiisa amanamootti mooticha tajaajiluu itti fufuuf fedha qabu turan. Ba’uu 20:3-6 fi K/Deeb.6:4 dubbisi.Ejjennoo namoonni kun fudhatan irratti dhibbaa kan geggeesse ilaalchisee heertuun kun maal nuuf gumaacha?
Sabni hundinuu ajaja mootichaa dhaga’uudhaan sagalee meeshaa yeroo dhaga’an guguufanii fakkeenya warqeetiif sagadan. Shaadraak, Meshaakii fi Abed-Neegoo qofaatu mootichaaf abboomamuu diduuf ija jabaate. Namoonni Baabiloon muraasi dhimma kana dafanii gara mootiitti dhi’eessan.
Hammeesitoonni kun akkas jechuudhaan mooticha aarsuu barbaadan:
(1) Namoota kana mootummaa Baabiloon irra kan kaa’e mooticha mataa isaati;
(2) Namoonni Yihudaa waaqa mootichaaf hojjetan;
(3) isaan fakkeenya warqee mootiin dhaabeef hin sagadan (Daan.3:12).
Haa aaru iyyuu malee namoota sadan kanaaf mootichi carraa lammaffaa kenne. Mootichi toora waaqefannaa kana irra deebi’ee namoonni kun bakka isaanii gadi dhiisanii fakkeenyichaaf akka sagadaniif fedha qaba ture. Yoo didan garuu boolla ibiddichaatti gatamu. Nebukadineezaar jecha oftuulummaa “waaqayyo inni harka koo isin oolchu kun eenyu” (Daan.3:15) jedhuun waamicha isaa goolabe.
Isaanis jagnummaa uumama isaanii ol ta’een “(“Oolchuu yoo ta’e immoo, Waaqayyo keenya inni nuyi waaqessinu ibidda boba’aa keessaa nu oolchuu in danda’a, harka kee keessaas nu in oolcha, yaa mootii jedhanii deebisaniif.
Yommus Neebukednezaar gar malee dheekkame, fuulli isaas shaadiraak, meshaakiifi ebdneegootti in gedderam; humna ibiddichaa isa dur gubu caaaa dacha torba akka gubsiisan in abboome. ” (Daan 3:17, 18).
Akka Waaqayyo isaan oolchuu danda’u yoo beekan illee kana akka inni isaaniif godhu wabii hin qaban. Ta’us garuu jiraatti akka gubatan yoo nbeekan illee ajaja mootichaa fudhachuu in didan. Amantii akkasii eessaa arganna?
GOOFTAAN NU HAA GARGAARUU
nagaan waaqayyoo isiinif haa bayyatuu!!! — January 17, 2020
nagaan waaqayyoo isiinif haa bayyatuu!!!
January 17, 2020 January 29, 2020 /gadisaderejemakonnen/Leave a comment
bagaa sanbata gammachuu kanaan isiin ga’ee jechaa sanbanni kun
sanbata hibboon keessan itti hikamuu
sanbata nagaa fi
sanbata fayyinaa isiinif haa ta’uu galatooma